Iprofayile yenkampani - iGenzon
Izixhobo zeNovel ye-Genzon
Yasekwa ngo-2017, iSuyyang Genzen Novel Equipment Co, Ltd. (ekubhekiselwe kuyo njenge- “GENZON Novel Equipment”) iphantsi kolawulo lweGENZON GROUP nayo ethathela kuyo ulawulo kunye nokusebenza kwayo.
Iqela leTyalo-mali leGenzon
IGenzon Investment Group Co, Ltd. (i "Genzon") yasekwa ngoDisemba 2003. Inentloko yayo ebekwe eShenzhen, iGenzon inabasebenzi abangaphezu kwama-5,000 kwilizwe liphela. Ukubekwa njengomboneleli ngeenkonzo zecandelo lobugcisa obuphezulu, iGenzon ikakhulu ibeka utyalomali kwimizi-mveliso, ukuphuculwa kwezindlu kunye nokwakhiwa kweekhampasi zorhwebo, phakathi kwamanye amashishini.
Ngokuphathelele kutyalo-mali lwamashishini, iGenzon iphuhlisa amayeza, izixhobo ezitsha kunye nemveliso yensimbi enomgaqo-siseko wophuhliso lolwabiwo lwezixhobo ezisekwe kwimarike. Apho, u-Welmetal uzibophelele ekuveliseni kunye ne-R&D yeemveliso zensimbi ecocekileyo, ngelixa i-Genzon New Equipment igxile kumhlaba wezixhobo ze-polymeric. Kukho neeprojekthi ezininzi zeprojekthi yephothifoliyo yeGenzon. Ngokuphathelele kulwakhiwo nokusebenza kweekhampasi zemizi-mveliso, i-Genzon igxila amashishini ayo kwi-Greater Bay Area, kwaye okwangoku iyakwazi ukuzenzela kwaye isebenza iikhampasi ezenza imveliso ezininzi.
Kwiminyaka elishumi edlulileyo, i-Genzon inamathela kwi-mission yokudala i-ecosystem ephawuleka kwaye inikezela ukuba ibe shishini lokulinganisa oluthembekileyo. Ukuthatha amathuba ngexesha leenguqu ezinkulu kunye nohlengahlengiso kuqoqosho e-China, i-Genzon, njengesiqhelo, iya komeleza kwaye isebenzele amashishini ongezelelweyo anexabiso eliphakamileyo kwaye ixhase uphuhliso lokwenza amashishini ngezixhobo zalo zeofisi kunye neenkonzo eziphambili zezinto eziphambili. Iqela leGenzon liphuhlise iipotifoliyo zepaki yeemveliso kunye nabahlali. Kwiminyaka edlulileyo, yaqala ukukhula kwezorhwebo, izakhiwo zeofisi, abahlali, ihotele kunye neklabhu yegalufa, kwaye yafumana izibonelelo eziphambili kunye namava kuphuhliso lwecandelo kunye nolawulo lweepropathi.
Iqela eliphambili le-R&D, likhokelwa ngugqirha ofundele eMelika, limiswe kwi-Silicon Valley ukuthimba itekhnoloji yehlabathi ekhokelayo
Isiseko sokuvavanywa kwefilimu ekumgangatho ophezulu sinceda ubuchule bethu bokulungelelanisa kwimveliso, kufundo kunye nophando
Itekhnoloji yonxibelelwano eyonakalisayo eyonakalisayo, iphulo elizimeleyo lezinto ezizimeleyo kunye nobuchwephesha obunelungelo lobunikazi ngokugunyaziswa kwemimandla eli-15 kubandakanya iChina, iUS, iYurophu, iJapan neTaiwan.
Ukuvunywa kweprojekthi yokufumanisa iziphumo zorhwebo lwePhondo lase Jiangsu ngonyaka ka-2014
Ibhaso lesi-2 kumjikelo wokugqibela woKhuphiswano lweTshayina lweTshayina kunye noKhuphiswano loRhwebo-kwiShishini leNovel Equipment ngo-2014